Fitohizan'ny hafatra : eklipsa
rhaj0 - 21/08/2017 15:16
Ka misy eklipsa hita aty zamerika avaratra, ary dia izany foana no resaka.
Dia ao anaty Baiboly hono, dia ireto resaka ireto hono, hozy ny mpandinika, no ni-s'inspirer avy @ fisian'Eklipsa (raha tsy hoe, dia tena miteny Eklipsa mihintsy ny "mpaminany", fa ny filazany azy, na koa ny mpanoratra no mamala-kira
Fa eritrereto foana ho'a ny fahaizana amam-pahalalana (niveau de connaissance) an'ireo olon'ny moyen-orient de l'an zéro (i Jesosy anisany).
izao izao hono, miara-mijery daholo ry zamerikana ao, raha handeha hatory ny vorona r@ 18:25 GMT, na dia atoandro be nanahary azany ny ao zamerika ao
RBNIR - 22/08/2017 08:44
Izany hoe raha azoko tsara izany i rhajo ankehitriny dia mihevitra ny tenany ho ambony fahalalana noho i Jesosy?
Fanontaniana ary rhajo
1 Tamin'ny fomba ahoana no nahavitan'i Jesosy (kely fahalalana) nanasitrana ireo boka , nampahiratra ny mason'ireo jamba, nampatanjaka ireo malemy, ary nanangana ireo maty...
Fanamarihana : marobe ireo fa tsy iray ary nisy vavolombelona marobe nanatrika (izay indrindra no nahatonga ny fahasarotampiaron'ireo mpanoradalàna tamin'izany andro izany)...
Sady tao anatin'ny indray mipi maso fa tsy hoe niandry fotoana...
2 Ianao izany izao efa manana fahalalana mahavita tahaka izany??? na koa mihoatra aza????
rhaj0 - 22/08/2017 13:19
esy e ry RBNIR. TSY "izaho" (irery) no "ambony fahalalana noho i Jesosy", fa ny raolona-2017, h@ ankizy ka h@ ianao RBNiR io koa, raha resaka eklipsa. Omaly izao ny ankizy nisomaritaka faly mihintsy nahita an'i Volana nisongona an'i Masoandro. Dia izany ve (hozy ny ankizy) no natao fampitahorana t@ taloha? OO doyy eeee...
Imaziner-o ho'a t@ andron'i Jesosy: tsy fantatra akory hoe "boribory" anie io tany io, mainka fa hoe, mihodidina ny masoandro anie ny tany. Koa na i Kilimanjaro ao atsimo ao azany ho'a tsy fantatry ry Jesosy sy ny olon'ny moyen-orient-de-l'an-zero akoriny ny fisiany.
Dia ny @ Jesosy nampahiratra ny mason'ireo jamba, jereo tsara fa dia ilay Ankizy (mihinana gilasy) no tapaka fa tena nandrasaonina be ity angano.. dia ianao indray ve ry RBNIR no mbola @ izany? efa mandroso ho'a ny taona (2017) eee...
Miharena - 22/08/2017 13:56
Diso indray kosa namana Rhajo ny filazanao fa tsy fantatr'i Jesoa hoe boribory ny tany ah!
Tsy jeografia no nampianariny fa fiainana mandrakizay aloha ka aza afangaro.
Fa raha hiteny ianao hoe tsy fantany io zavatra hitanao sy hindrahindrainao fa fantatry ny olona ankehitriny io, dia averiko any amin'ny zava-nitranga tamin'ingahy tsaratsara indray ianao.
Henony tsara fa misy rivotra be mampihodina ny planeta tsirairay izay nolzain'i Jesosy azy fa asan'ny Rainy ireo.
Ka aza miseho ho mahay noho ny Tompony e!
Miharena - 22/08/2017 14:16
Fa ilay eklipsa izay zavatra aoridinera be dia atao toy ny inona ery hoe nahay nijery izany tamin'ny teknolojia hono!
Fa raha teknilojian'Andriamanitra dia lavin'ny olona noforoniNY ihany!
Mahatsikaiky ihany an!
rhaj0 - 22/08/2017 14:51
Miharena misy rivotra be mampihodina ny planeta
Bravo Miiharena kipantsin'Andtrmna. TEna cyclone be mimhitnsy izany hono, hozy Miharena, ny "ao ambony ao".
Miharena Fa raha teknilojian'Andriamanitra...
Inona indray hono izany "teknilojian'Andriamanitra" izany ry Miharena.
Fa dia efa tsisy frein mihintsy ve izao fitenitenenam-poana manala baraka Jehovah izao ee....
Tena tapaho ny hohon'ny kitrokeliko raha misy teny hoe "teknolojia" ao anaty Baiboly.
RBNIR - 22/08/2017 15:01
« Ary rehefa tokony ho tamin'ny ora fahenina, dia maizina ny tany rehetra ka naharitra hatramin'ny ora fahasivy izany, » (Lioka 23:44)
« satria nihamaizina ny masoandro, ary triatra misasaka ny efitra lamba teo amin'ny tempoly. » (Lioka 23:45)
1 Adiny telo be izao ny (maximum 8 minute ny durée eclipse total amin'izao fotoana izao n'aiza n'aiza toerana misy antsika eto amin'ity globe terrestre ity)
2 triatra misasaka ny efitra lamba (efa nahita eclipse v ianao niaraka tamin'ny tranga toy io rhajo???
RBNIR - 22/08/2017 15:02
Raha olona 1 hoy aho, mety azo eritreretina ihany fa betsaka anie rhajo e! sady ny toerana sy ny fotoana samihafa foana, ny olona vavolombelona miova hatrany,
RBNIR - 22/08/2017 15:11
Tsy mino mihitsy ianao izany fa ho avy ny fotoana hanaperan'Andriamanitra ny andron'io masoandro io (hatao tonga amin'ilay atao hoe fin de vie ny masoandro) aminao dia eclipse ireo voasoratra ao ireo???
Ny eclipse total hoy aho tsy miohatra 8 minitra, n'aiza n'aiza toerana misy antsika (vakio ilay apok.8:12 izao no voasoratra ao...« ...... dia nasiana ny ampahatelon'ny masoandro sy ny ampahatelon'ny volana ary ny ampahatelon'ny kintana rehetra, mba ho maizina ny ampahatelony, ka tsy hazava ny ampahatelon'ny andro, mba ho toy izany koa ny alina. » (Apokalypsy 8:12)
Firy ora ny hapahatelon'ny andro, ary firy ora ny hapahatelon'ny alina???? 8 minitra v izany???
rhaj0 - 22/08/2017 15:27
Iza hono no nanoratra ny Apoakalipsa:
Dia toatoa ny ahoana ny fahaizana amam-pahalalana t@ izany taona 200 izany??
Dia na aholakolanao tahak'n'inona azany izany, isavisavihanao voambolana siantifika izay tsy hainao akoriny ny dikany, dia tena tsisy henatra mihints yve aminao fa dia mirehoka lava eo foana ianao fa marina (ara-baiboly) daholo izany??
Dia iza aby koa re ry RBNIR no "vavolombelona" @ izany "fahajambana sitranina @ fotaka+rora" izany??? Maninona ho'a tsy andramanao sy Hrnrn ao koa izany recette-nJesosy izany eee... Fa raha tsy mahavita ho'a dia tandremo fa ho asian'i Jesosy @ ilay hoe, "ry TSY mino"...
Dia mbola izany rehetr izany foana ve no andanianao bandwidth eto ry RBNIR?
RBNIR - 22/08/2017 16:41
ankehitriny olona voan'ny cancer, tsy nandalo chimio therapie ary efa nihintsana avokoa ny volony no indro fa sitrana ary niverina naniry ny volony.....aminao fifandrifianjavatra v izany???
Ankehitriny, olona efa certifié fa momba ary tsy miteraka intsony, (misy taratasy fanamarinan'ny dokotera) no indro lasa nahazo zaza indray, aminao fifandrifianjavatra koa???
N.B: Tsy voatery izay tadiavinao no ataon'Andriamanitra (IZY NO MPANANTANTERAKA FA TSY NY OLONA ary TSY DIDIN'OLONA IZY AMIN'NY FAHAGAGANA NOTOKONY HATAONY) satria efa nisy nangataka toy izany tahaka anao dia izao no navalin'i Jesosy azireo...« Ary raha mbola niangona ny vahoaka betsaka, dia nilaza hoe Izy: Ity taranaka ity dia taranaka ratsy. Mitady famantarana izy; nefa tsy hisy famantarana homena azy, afa-tsy ny famantarana ny amin'i Jona; » (Lioka 11:29)
rhaj0 - 22/08/2017 17:23
REhefa tsy takatrao (na koa tsy takatry ny siansa) ny nahasitrana azy diaa akapohy ho Andrmntra ho'a ee... Dia ilay olona voan'ny cancer sitrana, na ilay momba tsy miteraka nefa niteraka koa @ io, asa raha "mpanaraka ny sitrapon'Atra" sa atheista sa boudista?
Maninona moa raha tsapainao (sy Hrnrn) mihintsy Andrtrmna ee... dia ndana loary ny masonao azany ee..
- dia ampiharo ho'a ny recette-nJesosy: fotaka + rora
- na koa, dia mivavaha mafy fa ho sitraniNY ho azy eo.
Matio 17:18 Tamin'izay, dia nanatona an'i Jesoa mangingina ny mpianany ka nanao hoe: Nahoana no tsy naharoaka azy izahay? 19 Noho ny tsy fahampian'ny finoanareo, hoy Jesoa taminy.
Fa efa hitan-dry RBNIR ny parade (nandra) ee... mody hoe, Izy no mpanantanteraka.. nefa anie efa mazavabe io @ Matio io, fa ireo "mpianaNY" no nanao fa TSY nahavita ee..
Tena mino marimarina mihintsy aho, fa efa nofokain'i Jesosy @ ilay hoe "Ry taranaka tsy mino sy ratsy fanahy" i RBNIR sy i Herinirinan-dRBNIR ao @ imazination-ny tao... Izany no mampipepapepa an-drizreo ao sy eto io, mitady hanadio tena.
RBNIR - 22/08/2017 17:30
REhefa tsy takatrao (na koa tsy takatry ny siansa) ny nahasitrana azy diaa akapohy ho Andrmntra ho'a ee... Dia ilay olona voan'ny cancer sitrana, na ilay momba tsy miteraka nefa niteraka koa @ io, asa raha "mpanaraka ny sitrapon'Atra" ?
Olona iray finoana amiko no resahiko...
Izaho koa efa nanao temoignage tato....
rhaj0 - 23/08/2017 13:56
Dia i Hrnrn, izay mpiresaka @ Atra ve no "nanao dia nahavita" ry RBNIR?
Dia inona no nataon'i Hrnrn? nivavahany tao ampiangonana ve ilay olona, sa nametrahany tanana, sa nampiasainy ny recette-n'i Jesosy toa ny fotaka+rora @ jamba, na tain-tsofina+rora @ marenina ets... ???
Sa.. sitrasitrana "ho azy" teny ilay "olona iray finoana aminao" ao io rahefa avy "nivavaka" mafy tany an-tranony tany?
Apetraho an-tsoratra eto ilay temoaniazy mba iaraha-midinika eee...
RBNIR - 23/08/2017 14:08
Niparitaka tany amin'ny video (fandaharana) nalefa tany amin'ny TV isan-karazany tany izany lazaiko izany an!!!
Miharena - 23/08/2017 14:16
Aza manao valinteny kiboribory rehefa tsy manana ambara aloha Rhaj0 a!
Ny fijoroana vavolombelon'olona tsy azo hafokaina satria tsy ianao na izaho no niaina izany fa izy.
Ary raha toa ka mbola liana amin'ny fivavahana sy finoana ihany ianao dia henoy aloha izay miteny ao fa aza tonga dia malaky mandray maivana izay voalaza ianao.
rhaj0 - 23/08/2017 15:33
Ny @izao "fahagagana" sy "fahasitranana" ary "fitsanganana @ maty" lazain'izao Belazaon'i Miharena sy RBNIR izao, dia ampiasao kely ny coco eee... :
1- maninona no tsy nihazakazaka i Vatican ohatra, dia NANADIHADY, dia nanamasina??
2- maninona no tsy nihazakazaka ireo tia-vola, dia mangalatra hay ao?
3- maninona no miherika rikoriko ny mpijery (izay Kristiana) sasany?
Dia firifiry re no eraky ny interinety no milaza-tena fa vavolombelon'izao "fahagagana" sy "fahasitranana" ary "fitsanganana @ maty" na koa "herin'izao Atra mihatra mivantana" izao, dia mbola tsy tonga saina foana ve ianareo eee??? Hafa ny fahagola, tsy mahita afa-tsy ny fitak'i Belazao ao @ vohitrakely (sy box-kely). Efa ihomehezan'ny Just For Laughs, nefa dia mbola manao fiki-maty ao foana.
Aseseho ireto, dia ampitahao @ hitanao ao. Fa tandremo indray sao ianaranareo ireo ry RBNIR sy Hrnrn, dia hanambakanareo olona tsy manan-tsiny ao an!..
endriny - 23/08/2017 17:42
Raha marina hoy aho ny fahagagana dia nahoana ry zareo mpitondra kristianina no nanangana hopitaly loteranina teny Ambohibao, St Joseph de Clinic eo Ankadifotsy, Hopitaly Advantista eny Soamanandrariny, Hopitaly Loteranina Manambaro...
Sa tsy mino izy ireo fa mba miogaoga fotsiny mba hiantsoana ondry ho volosana?
Miharena - 23/08/2017 20:31
Inona moa no hihazakazahan'i Vatican any amin'izany fahagagana misy amin'ny olona samihafa izany? Ny azy aza efa tsy erany no fahagagana mitranga ao aminy ao koa handeha ho any izy hanamrina ny any? Ny azy ihany no hamarininy fa tsy ireo rehetra izay tsy ao aminy satria izay no anjara adidiny, ny mijery ny mpino ao aminy.
Ka tsy mitombina ilay fanontaniana apetrak'i Rhaj0.
Ho an'i Endriny indray, ny fananganana hopitaly tsy midika fa tsy misy fahagagana.
Fa ny fanontaniako anareo dia ity, ianareo ve manaraka ireny fijoroana ireny sa tsia vao manambara sy manontany eto sa dia efa fomba raikitra ilay fomba faniratsirana ataonareo eto?
rhaj0 - 23/08/2017 23:43